The Refugee Center Online ixtiraamaya arimahaaga gaarka ah.
ogeysiis Khaaska ah Tani waxay shaaca dhaqamada gaarka ah ee (website cinwaanka). ogeysiis Khaaska ah Tani waxay khusaysaa keliya macluumaadka laga soo ururiyey by website this. Waxaa kuu soo sheegi doonaa soo socda:
Waxaad dooran kartaa ka mid ah wax xiriir mustaqbalka naga waqti kasta. Waxaad samayn kartaa waxyaabaha soo socda waqti kasta oo nagala soo xiriiraya: privacy@therefugeecenter.org.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama haddii ay dareemaan in aan aan ku waari by Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this, waa inaad isla markiiba nala soo xiriir via email ugu: privacy@therefugeecenter.org.